EyoMsintsi 14, 2018 admin
Hong Kong othengisa wazisa app blockchain for yokulandela diamond
A phambili Hong Kong izacholo umthengisi, Chow Tai Fook, uzimanye kunye Gemological Institute of America, umzimba ophando non-nzuzo, ukwenza app blockchain-based eziya kwenza abathengi ukuqinisekisa imvelaphi nenyani amatye ezithengiweyo. Olu phuhliso kuzisa iinkqubo kufutshane nabantu rhoqo ukuphunyezwa blockchain ngokusebenzisa ujongano lomsebenzisi ifikeleleke, le app.
Ukungenisa avenue esiqhelekileyo abasebenzisi rhoqo ukufikelela kwiinkonzo ezifana ngokuqinisekileyo imele inyathelo elikhulu ukuya isisombululo sexesha elide. Eli phulo yi Chow Tai Fook uya kubona idayimani kuthengiswa ezivenkileni zayo T Mark-branded "zokufunda" kubathengi, yi ohlonitshwayo Gemological Institute of America. Ukuba nako ukubonisa imvelaphi nenyani into ngokuqinisekileyo esazisa kwimboni kwixesha "umoya", nokwenza iinkonzo ezifana zifikeleleke lula nge iinjongano zomsebenzisi eziqhelekileyo ngathi app ngokwenene linyathelo omkhulu kushishino.
platform ye crypto yorhwebo Linganisa co-umsunguli xa uqala ishishini kwamaziko
Voyager, iqonga cryptocurrency urhwebo owadalwa lokuqala CTO eyaziwayo kunye owayesakuba yesigqeba E * Trade, usungule icandelo elitsha labarhwebi eyenzelwe ngokukodwa kubatyali yeziko. Voyager labarhwebi yeQumrhu ijolise ekunikezeleni i "best-in-class crypto yorhwebo isisombululo" kwimizimveliso enkulu efuna lokuthengisa cryptocurrencies, EG. imali uthango, ukuthenga-side yeenkampani, nabenzi market. Labathengisi ekugqitywe ukuze uqalise phambi kokuphela konyaka.
"Ukunabisa umnikelo lwethu sesimeni izibonelelo zethu ukubandakanya uluntu lweziko osoloko yinxalenye imephu zethu zobuchule zexesha elide,"Athi uStefano Ehrlich, CEO of Voyager kunye yolawulo eyayisakuba Trade * E. CIO Glenn Barber wathi: "Injongo yethu kukuba ukuzisa izinga lokufikelela, ne ezintsha zimali yeziko, ukuthi ngqo, bafuna ukuze bathathe inxaxheba ngempumelelo ngorhwebo crypto.”
Ingxelo Daily Market Kraken for 13.09.2018
$178M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Hey Daily Team Altcoin! I wan...
EyoMsintsi 18, 2018 e 9:47 PM